महिलाका कामोत्तेजक अंग कुन हो ? – Saurahaonline.com
महिलाका कामोत्तेजक अंग कुन हो ?
हिलाको तिघ्राको भित्री भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ। त्यसैले यो भागलाई कामोत्तेजक मानिन्छ। यो भागमा स्नेहपूर्व भए, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरे महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन्।
९.पेटको तल्लो भाग